उच्च रक्तचापको असरः शरीरको कुन-कुन अंगमा क्षति पुग्छ ? – Rastriyapatrika
उच्च रक्तचापको असरः शरीरको कुन-कुन अंगमा क्षति पुग्छ ?
अहिले कोही खानामा नुन र चिल्लोचाप्लो कम गरिरहेका छन् । कोही नियमित रक्तचाप जाँच गराइरहेका छन् । कोही नियमित व्यायाम गर्न थालेका छन् । कोही तनाव नियन्त्रणको वाहाना खोजिरहेका छन् । कोही सन्तुलित जीवनशैलीमा अभ्यस्त हुँदैछन् । किन ?
किनभने उनीहरुको शरीरले ‘हाइ अलर्ट’ जारी गरिसकेको छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, दम जस्ता समस्याले ग्रसित बनाउँदैछ ।
त्यसमध्ये यहाँ उच्च रक्तचापको चर्चा गरिएको छ ।
उच्च रक्तचापबारे आधारभूत जानकारी सबैलाई छ । उच्च रक्तचाप तनाव, खराब खानपान, जीवनशैली, कुनै गंभिर शारीरिक समस्या र वंशानुगत कारणले लाग्ने गर्छ । उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्नु भनेको तनावरहित शान्त रहनुका साथै स्वास्थ्य जीवनशैली र खानपान अंगाल्नु पनि हो । औषधीद्वारा पनि यसलाई नियन्त्रण गरिन्छ ।
उच्च रक्तचाप भइसकेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । यदि बेवास्ता गरिएमा त्यसले शरीरका अरु अंगमा क्षति पुर्‍याउँछ ।
मिगौंला फेल हुन सक्छ
किड्नी अर्थाम मिर्गौलाले हाम्रो रगतबाट दुषित पदार्थहरु अर्थात टक्सिनलाई बाहिर निकालिन्छ । उच्च रक्तचापको कारण किड्नीमा दबाब बढ्छ र कैयौं पटक रक्तनली साँघुरो र मोटो हुन्छ । यस बाहेक किड्नीमा रगत छान्ने कोषहरुलाई पनि यसले प्रभावित बनाइदिन्छ ।
जसकारण मानिसको किड्नीले आफ्नो काम ठिकसँग गर्न सक्दैन र रगतमा दुषित पदार्थ जमिरहन्छ । जसले समस्या बढ्दै गएर किड्नी फेल हुने र अन्य रोग लाग्ने खतरा पनि बढ्छ ।
त्यस्तै रक्तनली धेरै साँघुरो भएर यदि रगतको बहाव नै रोकियो भने मानिसलाई हार्ट अट्याक पनि हुन सक्छ ।
उच्च रक्तचापको कारण समय बित्दै जाँदा रोगीको मस्तिस्कमा रगतको आपूर्ती कम हुन्छ र मानिसको सोच्ने सम्भिmने शक्ति घट्दै जान्छ ।
उच्च ब्लडप्रेसरको समस्याले मानिसको आँखालाई पनि प्रभावित बनाउँछ । उच्च रक्तचापको कारण मानिसको आँखाको ज्योती कम हुँदै जान्छ जसले उनीहरु धमिलो देख्न थाल्छन् । यसैले उच्च रक्तचापको समस्या भएका बिरामीलाई चिकित्सकले आँखाको नियमित जाँच गर्ने सल्लाह दिने गर्छन् ।